Ka weyn ka weyn - Maxaa size ah flash ayaad u baahan tahay z
Qalabka USB waa qalab aad u awood badan si ay u hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa la siiyaa user ee arrintan la xiriira iyo kaydinta xogta marna waa arin oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in USB ugu fiican waxaa la doortay in arrintan la xiriira taas oo xaqiiqo ah oo la xidhiidha tayada drive in la doortay. Waa in la ogaadaa inta badan isticmaala ka dib markii drive USB tagaan fekerayaan weyn u Khayr Roon marka dhab ahaantii ma aha in inta badan xaaladaha iyo waxa lagu macnayn lahaa si faahfaahsan ee ka qayb dambe ee tutorial sida waxa loo karin sida gadashada Hanuuniye fiican ee dadka doonaya in ay hesho heshiis wanaagsan ee arrintan la xiriira.
Horumarinta ee size USB flash drive sanadihii la soo dhaafay
The dekedaha taxan iyo midka ahaayeen ugu weyn oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in loo isticmaalay hor horumarinta USB flash drive. In Duke of horumarinta ee sayniska ee technology isticmaalka qalab USB uu ahaa arrin si loo baahan yahay in hab buuxa oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in interface USB ama version 1.0 soo baxay in sanadka 1995. qaybtan waxa wareejiyo xogta xawaare 12 MB / s iyo waxaa loo isticmaalay iyo mahadiyo dadka isticmaala si ay u weyn kordhiyo. Sidaas darteed waa in sidoo kale lagu xusay in interface ka USB 1.1 wareejiyo xogta xawaare ka buuxa ee 12 MB / s iyo sifooyinka dheeraad ah oo ku jiray in bandwidth hoose ayaa sidoo kale si ay taageerayaan alaabta waxaa loo isticmaalay in ka badan marka la barbar dhigo horreeyay ee. Marka aan ka hadlo horumarka ee hadda ka dibna 2.0 USB interface la bilaabay sannaddii 2000 iyo USB ah 3.0 ayaa beryahan dambe bilaabay inay degdeg ah super 4.8 GB / s.
Arrinta ugu la xiriira horumarinta flash drive USB waa in milkiilayaasha asalka ah ee qalabka meel ay tahay in la helay iyo shirkad kasta ayaa sheegtay in drive ayaa la soo saaray iyaga ama ay yihiin kuwa ku been abuurtay this qalab laga cabsado. Sidaas daraaddeed tirakoobka ma aha oo nadiif ah oo dhan oo halkan lama soo bandhigi karo habka ugu fiican. The stats oo keliya ee la heli karo ama lagu dari karaa in inta u dhaxaysa 1.0 iyo USB USB 3.0 version wali la isticmaalo sida USB 2.0 ayaa la bilaabay in la hubiyo in xawaaraha super wareejinta xogta waxaa ku riyaaqay oo aan arin kasta oo lagu keydiyo ayaa sidoo kale kor u kacay taas oo ayaa hadda ogolaatay user ay u kaydiso 256GB xogta ku wadid hal. Jadwalka hoose waxa ka soo qaatay http://www.ebay.com/gds/Guide-to-Choosing-USB-Flash-Drives-/10000000177629671/g.html ku tilmaamay xaaladda habka ugu fiican:
Flash drives ayaa hore loo diyaariyey iibka ganacsiga ee 2000, oo lahaa awoodda kaydinta MB oo kaliya dhowr ah. Tani jiilka koowaad ee flash drives ahaa kacaanka ah in ay mar kaydinta la qaadi karo, laakiin waxaa si deg deg ah u qaalisan marka la eego awooda shaqeynta iyo kaydinta.
Labaad (USB 2.0)
Jiilkii labaad ee USB flash drives bixisaa si weyn u soo hagaagtay heerarka kala iibsiga iyo awoodda kaydinta si weyn u sii weyn tahay racii ugu horreeyey. Upper-dhamaadka iftiimiyo 2.0 drives awood u qoraal ahaan xogta ee ku dhawaad ​​20 jeer heerka unugyada horreeya, oo ay awoodaan in ay ku kaydiso dhowr GB halkii MB.
Saddexaad (USB 3.0)
USB flash 3.0 drives mar kale bixiyaan ay kor ugu kaceen awoodda kaydinta iyo wareejiyo heerka badan ka horreeyay, oo ay awoodaan in ay akhriska iyo qoraalka xogta ee qiyaastii 10 jeer heerka 2.0.
Wayn ma aha had iyo jeer ka wanaagsan
Tani waa xaqiiqo dhab ah oo sida dadku u storage devices waaweyn in ay yihiin mid aad u jaban oo ku qabaa in ay ka heleen ugu fiican taas oo dhab ahaantii wax badan oo meel fog ka badan waxa loo baahan yahay. Celceliska qiimaha USB ah in la heli karo suuqa waa sida soo socota. Haddana waa ku adkeystay in user waa in la geeyo ee sifooyinka guud ahaan in ay la socoto oo waa inuusan marna demin magaca shirkadda iyo warkiisiina:
1. 8GB kharash celcelis ahaan $ 5
2. 16GB qiimaha celcelis ahaan $ 8 ilaa $ 10
3. 128GB qiimihiisu yahay $ 30
4. 64 GB qiimihiisu yahay $ 18
5. 64 GB la USB 3.0 interface kharash $ 23 celcelis
Oo weliba waxaa kaydinta iyo qiimaha user waa in la hubiyo in arrimaha soo socda waxaa loo arkaa in arrintan la xiriira in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka shaqeynayaan tahay waxaa ku riyaaqay habka ugu fiican oo dhinaca kale waxa ay sidoo kale badbaadin doonaa ka dhigi lahaa sameeyo kharash ah ee user iyo ogolaan doonaa ka dibna si aad u hesho heshiisyo ugu fiican waqti lahayn gudahood oo dhan.
1. xawaaraha kala iibsiga File waa inuu noqdaa isir ka ugu horrayn waxa weeyi in ay tahay in la tixgeliyo.
2. Doorashada u dhexeeya 2.0 iyo 3.0 ab waa in la sameeyaa iyada oo daryeel
3. user waa doorato aalad lagu kaas oo u hubinaya in nooca xogta iyo meel bannaan oo ay tahay in la tixgeliyo ee la xiriira si ay u gudbiyaan.
Sida loo doorto USB saxda ah si ay u isticmaalaan?
Sidoo kale waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ah in la tixgeliyo in arrintan la xiriira iyo user waa in la hubiyo in si aad u hesho sida ugu fiican ee dhibcood in lagu hoos ku xusan yihiin oo keliya ma aha, laakiin waxaa loo tixgeliyaa in sidoo kale codsatay in la hubiyo in ka dhigi natiijada waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo user wuxuu sidoo kale uu helo ugu fiican ee mar walba la xiriira arrintaas. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in drive USB in la iibsaday waa waafaqsan shuruudaha ku files in ay tahay in la wareejiyo sidii aan xukunka looga baahan yahay in aysan macquul aheyn si aad u hesho sida ugu fiican oo la sameeyo state of natiijo tahay in arrintan la xiriira ka. Dhibcood waa sida soo socota:
Xawaaraha kala iibsiga Data
The interface USB hadda 3.0 taageertaa heerka wareejinta xogta ilaa 4.8 GB / s iyo sabab la mid ah waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in qalabka USB la iibsaday sida loo baahan yahay iyo haddii ay la soo sameeyeen ka dibna waa in la ogaadaa in user sameeyo ugu fiican isaga iyo nidaamka ay tahay isticmaalka un la. Tani xawaaraha wareejinta xogta sidoo kale saameyn ku yeelan doonin shaqada in la sameeyo arrintan la xiriira.
User waa in la hubiyo in design ah caato ah oo quruxsan oo waxaa doortay in arrintan la xiriira iyo sidoo kale user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira by in la hubiyo in loo baahan yahay nidaam iyo meelaynta la iigu xukumaa arrintan la xiriira sameeyo. Waxaa jira drives USB taas oo ay design sirgaxan oo sidaas daraaddeed iyaga waxaa loo abuuro qas halkii ay gacan oo sidaas daraaddeed user waa in la hubiyo in sida ugu fiican ee la qabtay si loo baahan yahay nidaamka by doorashada USB u dhigma baahida sameeyo.
Waa maxay xajmiga aad jeceshahay ee flash drive?
> Resource > Flash Drive > ka weyn ka weyn - Maxaa size ah flash ayaad u baahan tahay